Dzidzisai Nokurwisana Bus In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Dzidzisai Nokurwisana Bus In Europe
Mumaawa mashomanana, unogona kusora zhinji munyika itsva yakajeka uye sparkly. asi, ndeipi nzira yakanakisisa ikoko. Dzidzisai ne Bus mu Europe paaifamba?
Nokukurumidza uye nani kutsvaga!
zvitima, kusiyana mabhazi, rwendo ngaatarire kuburikidza mumaruwa. Izvi zvinoreva kuti pane nokudhiraivha panguva bhowa mugwagwa, kana mari maawa nyore kutamira kubva panzvimbo nenzvimbo, une mukana ona zvakawanda yako nyika akasarudzwa. Paunenge wagadzirira kuenda kune yako inotevera kuenda, muchawana ikoko pasina nguva. High-nokukurumidza Dzidzisai maringe Bus mu Europe. Chiri hapana-brainer.
Munich kuna Cologne Zvitima
No mumigwagwa yakawandisa motokari
By 'hapana mumigwagwa yakawandisa motokari', hatirevi 'hapana zvinozipa anorova'. We kureva hapana Kuwandisa kwemotokari mumigwagwa. Ndicho chinhu pamusoro penjanji - hapana chiri kuvhara nzira. Ndivo achirurama mutsetse kodzero kwauri kuenda.
Bus zvigaro zviri denser pane chitima zvigaro
Kunyaradzwa Train maringe Bus
Kana zvasvika pakufamba nechitima maringe nebhazi. Comfort ndimambo. Paunenge uchisarudza pakati Train maringe Bus mu Europe, Zvitima ndiwane kwete chete munzira asi-pakati, wo! At chitima dzemapurisa, unogona kumirira chitima kwenyu kunyaradzwa uye chengetedzo, zvakawanda munzvimbo kugara pasi, nokunwira kana kutenga zvokushandisa yerwendo.
On a Bus, iwe kugoverana chinhambwe chiduku (uye chimbuzi duku!) ne vamwe. hamungambovi kukwanisa kumuka uye utambanudzire makumbo ako kana kutamira yakanyarara chekufambisa, uye kurege kuva zvokudya kana zvokunwa iripo.
Chitima zvigaro ndivo vasununguka pane bhazi zvigaro
Iko kuchinjika kweTrain maringe neBus
pane chitima rwendo, zviziviso ichapa hwakadzama achikwira kwokuwirirana ruzivo pamusoro chitima yako, kubva apo mashizha kwarakabva anomira uye izvo pachikuva nayo ngaubve, uye kana uchida kuenzanisa chitima maringe bhazi ari mukana wokushandiswa, ipapo pamusoro chitima, munoziva mu 90% kunyatsoita kana iwe ichasvika.
A bhazi achawana iwe kubva A kuna B, asi kana uchida kuenda zvimwe, iwe uchava kumhanya kupinda anodhura matambudziko. Hazvizivikanwi sokunonoka anokonzerwa motokari mumigwagwa kungareva kurasikirwa kubatana kwenyu, kukudyira zvikuru.
On a Train, une shanduko yakazara; chete vanoenda uye kusvetuka pamusoro yaanopinda anorovedza huenderane zvirongwa zvenyu.
Hazvina basa kana ukapotsa chitima yako - unogona chete kusvetukira unotevera!
Uri kugutsikana mune Dzidzisai maringe Bus mu Europe Chavanoitirana nharo asi?
Enderera, bhuku rako chitima rwendo pamwe Save A Train. Nenzvimbo yakawanda mukati mechitima, uchava nzvimbo kugara shure, kufaranuka uye kunakidzwa girl paunenge ronga inotevera kufamba.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-versus-bus%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#bhivanha bhazi europetravel longtrainjourneys Chiteshi chechitima chitima mazano Train Travel TrainVSBus traveltips
How Travel Student By Train In Europe